Moscow State Institute of Relations International - Funda kwelinye ilizwe
Moscow State Institute of Relations International
Moscow State Institute of International Relations Iinkcukacha
isixeko : eMoscow
Zifumaneke : 1944
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa Moscow State Institute of Relations International
Babhalise kwi Moscow State Institute of Relations International
MGIMO yeyona iziko kangaka emfundo eRashiya abantu abaselula umdla ngamazwe. Kuba abafundi ngamazwe, MGIMO kukuba yaye ngaphezulu: yanamhla, ezishushu, nakwinkcubeko yengqondo ekhuthazayo nendawo ukufunda sixeko sikhulu eRashiya.
umzimba umfundi ezahlukeneyo MGIMO ngayo 6,000 itsalwa ukusuka kwizikhundla phezulu abafundi Russian yaye kwiiyunivesithi iqabane ehlabathini. MGIMO inika uluhlu olubanzi izifundo kumanqanaba zesidanga kunye abanezidanga - kwimibandela ngamazwe, ubuchwepheshe bezopolitiko, Economics, kunye nomthetho wamazwe, ukuba ubuntatheli, ulawulo lweshishini, nkqubo kwamandla. undergraduates International ungenza isicelo B.A ngokupheleleyo IsiNgesi-wafundisa. inkqubo okanye khetha izifundo mngeni kunye umdla in Russian. Abafundi bafuna isidanga Master ungenza isicelo yenye yeenkqubo kabini-isidanga nebe MGIMO ngayo, kwenziwa ngentsebenziswano namaziko amazwe, okanye bafune indawo yenye yeenkqubo MA ngaphezu amathathu wafundisa in Russian.
Kuba kwimbali yawo onke, MGIMO iyaqhubeka remake ngokwayo. Kule minyaka mihlanu idlulileyo, eyunivesithi lenze entsebenziswano amaninzi obutsha namaziko aphambili ehlabathini lonke. MGIMO nto ukudibanisa ngokupheleleyo kwi IziVumelwano Bologna, ngokucacisa imigangatho engqongqo ngamaziko emfundo ephakamileyo European. IYunivesithi likwazimisele babe ngonaphakade-neenguqu umzimba umfundi, ikharityhulam, nobomi ekhampasini ukuba lusabonisa udumo lwayo njengoko ndawo elizukileyo yaye eziphuhlileyo eRashiya ukuqonda imicimbi ngamazwe.
ERASHIYA'S INKULUMBUSO UNIVERSITY
MGIMO kuhle eyaziwa nezoLuntu ezininzi kangaka iziko eRashiya. Oku udidi ihlabathi yonke into kwekota – ukugqwesa edumileyo, zimela, coeducational, kwaye ime esidlangalaleni. izikolo MGIMO bakhe abasixhenxe kunye namaziko ezine zemfundo kuquka amasebe amaninzi emfundo, iyantlukwano, neenkqubo nebhaso, kwakunye namaziko ahlukeneyo kunye neenkqubo umsebenzi yenzululwazi oqala ngaphaya kwemida zesebe zemveli.
eyona yiyunivesithi yehlabathi eRashiya, MGIMO iye ikhaya Russian kubafundi abasuka ehlabathini lonke phantse 60 iminyaka, ukubonelela ngaphezu 5,000 ngamazwe baphumelele imfundo lunwenwe njengeenkokeli kwicandelo labucala kunye noluntu jikelele. Ukwengeza, MGIMO na ulwalamano olusondeleyo kunye namaziko aphambili kwezemfundo ehlabathini, kulo lonke elaseYurophu, Asia, naseMelika, kwaye Africa. MGIMO uzingca kujoliswe lwehlabathi kwaye MGIMO likhaya kubafundi zehlabathi.
MGIMO University wayengomnye kwiiyunivesithi zokuqala Russian ukuzibandakanya European Universities Association, kwaye zisayine IziVumelwano Bologna. Ziintanda MGIMO ibonelela yokufunda iinkqubo Bachelor kunye nesidanga Master ezaziwayo ehlabathini lonke, nabafundi yokufumana iziqinisekiso ezo izitshixo engqesho ezifundweni amathuba ngamazwe. MGIMO Honorary Doctorates ziye oluhlakaziweyo phakathi owaziwayo jikelele.
UKHETHO COURSE LONKE
MGIMO University unika phakathi kuluhlu olubanzi lweenkqubo zemfundo kunye specializations kufumaneka kwiyunivesithi koludidi naphi. Xa kuziwa ekinikeni abafundi kunye nemeko zokuqonda phakade - kuba ngapha ozakuzo ngamazwe, kulawulo loluntu, ishishini, Economics, umthetho, nobuntatheli, ukuba ukhankanye 53 iilwimi ifundisa - MGIMO iyodwa.
UKUFIKELELA PHAMBILI ZEMFUNDO
MGIMO University ihlanganisa imiba eyeyona kwikholeji kwezobugcisa melo kunye nezo eyunivesithi wophando. Le ndlela ibonelela abafundi ukufikelela kufutshane ngaphezu 1200 oonjingalwazi kunye namalungu yeFakhalthi, dibene 20 ngamalungu apheleleyo kunye namalungu elinganayo babizwe Russian Academy of Sciences, eminye 113 oogqirha lenzululwazi 400 zobugqirha abaviwa nenzululwazi. emfundo MGIMO buza neqhayiya kubafundi.
WORLD RESEARCH UKUDUMA
Ekubeni igama obalaseleyo kunye nobume academic MGIMO gqolo zeeteksi kakhulu amanqaku eyunivesithi. uphando yayo sandiswe jikelele ukudibana kunye namaziko ophando iziqhuba eRashiya, amazwe CIS, yaye ehlabathini lonke.Phantsi kwephiko loMphathiswa leMicimbi Foreign, MGIMO yeyona nkqubo axabisekileyo ngokucinga-itanki kunye iqonga lengxoxo-nohlalutyo kuphuhliso lwamazwe ngamazwe ehlabathi kunye nemicimbi yangoku, ngeminikelo yayo uhlalutyo kwihlabathi kakhulu befuna emva.
Kuba umbono ekuqalweni MGIMO kunye nefilosofi iye yahlanganiswa ngokutyumzayo bemveli ezifundweni kunye ezintsha ngokwasengqondweni. Innovative lweProgram Educational yeYunivesithi, silandelwe apha ekuhambeni 2007-2008, hlaziya zayo kwezemfundo esekelwe ubuchule. Le nkqubo wabona MGIMO ukuphuhlisa inkqubo entsha esemgangathweni ebonisa iintsingiselo yenzululwazi kunye zemfundo usebenzo, kunye nezenzo ezintsha zolawulo kunye nobuchwepheshe, nokutsala iinkokeli zemfundo ngamazwe.
Iyunivesithi idume ukugqwesa kwizifundo, intsingiselo Zonk iinkokeli zangomso eRashiya afunda khona ngoku, kunye liyanda inani kunoogxa babo ngamazwe. Nyaka ngamnye eyona izidanga kwizikolo eziphakamileyo eRashiya kukhuphisana iindawo ezintsha phantse eziliwaka, kunye neenkqubo – ingakumbi Economics, umthetho, nobudlelwane namanye amazwe – ukuba ukuya 30 zicelo indawo nganye.
MGIMO baphumelele ziquka abongameli, iinkulumbuso, kunye nabaphathiswa bezinye Azerbaijan, Armeniya , Bhelarusi, Bhulgariya, Kazakhstan, Mongoliya, Slovakiya, Ukraine kunye namanye amazwe.
MGIMO libonelela imfundo ekumgangatho ophezulu akukho kuphela, kodwa ithuba nanto lokuzuza abafowunelwa professional eya kubakho kakuhle ngaphaya kwimfundo esesikweni. sikhokelo yayixakekile kwaye mngeni kwizifundo kwancediswa bume esempilweni kwezentlalo apho abafundi ekuhlaleni kwaye befunda ziyafikeleleka kakhulu abandamkela kubafundi amazwe. Kule meko abafundi namhlanje unokuba abahlobo langomso ngamazwe kwezopolitiko, zomthetho, amashishini kunye neenkokheli zoluntu.
UBOMI ENKULU SOCIAL
Beyond isifundo, abafundi MGIMO uya azifumane ngakumbi iikonsathi ezininzi, zingqungqa, comedy nobusuku, kunye neziganeko zonke kwimidlalo onokucinga. Imibutho eyahlukeneyo umfundi balizalise ikhalenda kunye neziganeko olongezelelweyo zentlalo. Kanjalo, MGIMO na eMoscow, esinye sezixeko ezikhulu ehlabathini, kunye koluhlu ubuncwane zenkcubeko nezembali, inkcubeko elivuthayo Nightlife ezibengezelayo. Ikwanika ukufikelela lula yomahluko namandla yaseRashiya wanamhla, kunye nelifa layo eyindumasi yenkcubeko. MGIMO ngamava obomi emangalisayo abafundi ngamazwe.
School lobudlelwane bamazwe
School of Relations Economic International
UMthetho School International
International Institute of Policy Energy uxolo
MGIMO, leyo, e Russian, imele Moscow State Institute of Relations International, yasungulwa ngo-Oktobha 14, 1944 xa USSR Council of Abantu Commissars Sikwahlengahlengise School kutshanje wadala of International eMisebenzini le Moscow State University ibe iziko elizimeleyo. Kuqala ngokuba Institute of Relations International (Imo) yokuqala yawo 200 abafundi neenkonde asindileyo ngxaki zakhe yeSibini kweMfazwe Yehlabathi yaye babezimisele ukwakha uxolo ngamazwe kunye nozinzo.
Zisuka nje MGIMO wawenzelwe ukuba abe academic uphando kunye nemfundo iziko unique. Ngokukhawuleza waba iziko ehamba eRashiya uqeqesho kwamazwe, ne MGIMO buchopho ekwenzeni igalelo elikhulu inqumla amasimi yobudlelwane bezizwe, lizwe kunye regional izifundo, komthetho wamazwe ngamazwe kunye nobudlelwane zomnotho. Ukongezelela, ithathe indawo kwi phambili kwiinzame zenzululwazi, kunye nokusekwa kwe ihlabathi eziliqela kwizikolo ezaziwa zenzululwazi, kwaye nasemsebenzini izazinzulu ezininzi ezibalaseleyo Russian, kubandakanywa Academy of amalungu Sciences E.Tarle, L.Ivanov, V.Trukhanovskiy, S.Tikhvinskiy, N.Inozemtsev, no Y.Frantsev.
Ekuqaleni MGIMO isandiso izikolo ezithathu: School lobudlelwane bamazwe, School of Relations Economic International kunye School of Law International. abafundi International baqala ukuza MGIMO evela 1946. Ukususela ngoko MGIMO alumni ziye zaba ishishini kazwelonke, Iinkokeli noonozakuzaku zomthetho kumazwe amaninzi, lezininzi babe Ministers Foreign, iintloko karhulumente, ngisho kaMongameli.
in 1954 le Moscow Institute of Oriental Studies, omnye kumaziko zindala Russian nelandela kwiSikolo Lasarevsky edala 1815, ganiswe MGIMO. zamathala eencwadi I-Institute kaThixo safuma ngokuthi kongezwe leencwadi Lasarevskaya odumileyo, leyo akukho kontanga umzimba wayo uncwadi oluninzi oriental.
in 1958 MGIMO sibubona Institute of Trade Foreign, leyo esebenza ngaphambili phantsi kokhuselo lwe-Ofisi yoMphathiswa USSR for Trade Foreign. Oku kwakhokelela ukuba ukwanda kwe-School of Relations Economic International kunye ugxininiso kukuqeqesha kurhwebo lwangaphandle kunye neengcali zoqoqosho. in 1969 i-International Journalism School yasekwa.
Kwi-1980 kunye nasekuqaleni koo-1990, utshintsho olukhulu lwentlalo noqoqosho betshayela Russia wabona utshintsho olukhulu isakhiwo zemfundo iinkqubo MGIMO kaThixo. in 1991 a School entsha International Business and Administration Business yasekwa.
ukususela 1992 i-Institute sele ekhokelwa yi-Ngqonyela, UProfesa Anatoly Torkunov, kabani ubunkokeli iye sisixhobo wohlukane nengxokozelo 1990. Phantsi lolawulo lwakhe MGIMO liqalise inkqubo ebanzi lokuphucula imfundo kunye ezintsha, kuquka umanyano asondeza imfundo yaseYurophu ephakamileyo, ngokusebenzisa ukungena kwinkqubo Bologna, ekunabiseni nabo ngamazwe, kunye ukuphakanyiswa Institute ukuya phambili imfundo ngamazwe kunye nenzululwazi.
in 1994 MGIMO wanikwa iwonga University. Lo nyaka wabona nokudalwa International Institute of Administration, kulandela isigqibo nguRhulumente Russian ngolawulo lukarhulumente kunye noqeqesho lolawulo kamasipala. 1998 wabona Ngokusekwa School of Science Political, yokuqala udidi eRashiya ukuba baqwalasele uqeqesho nabaphathi kwiinkonzo zaseburhulumenteni.
in 2000 i-International Institute of Policy Energy uxolo yasungulwa, phantsi kokhuselo lwe MGIMO, kwi nyathelo kweenkampani amandla Russian phambili. Injongo Institute kukuqeqesha abaphathi ukwenzela ukukhuthaza intsebenziswano amandla ngamazwe.
Institute Educational European MGIMO kaThixo yasungulwa 2006, ezibonisa ngokubambisana yi-Russian Federation kunye Union European ukuba aququzelele phambili iinkqubo zemfundo ukuba amagosa Russian kanye zaseYurophu.
2011 umbonile ekusekweni kwesikolo yomncinane MGIMO kaThixo, the School of Applied Economics and Commerce. It iyodwa kwinkqubo yayo BA in Management Ecology and Wildlife, leyo iphuhlisa ubuchule entsimini imiba yezoqoqosho kunye nemvelo.
Qho ngonyaka MGIMO yamkela engaphezu kwewaka abafundi abatsha, kuzo zonke yinxalenye Russian Federation, ngamazwe ukusuka ngaphezu 60 amazwe. phezu 35 alumni Russian wonke amawaka sinelunda abafumene izidanga ukusuka eMoscow State Institute of Relations International. Izigaba MGIMO Alumni Association ekhonyayo kumazwe amaninzi ehlabathini lonke. in 2007, i MGIMO Alumni Association elisekwe endowment eyunivesithi yokuqala eRashiya - soPhuhliso Foundation for MGIMO.
Uyafuna ukuxoxa Moscow State Institute of Relations International ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
Moscow State Institute of Relations International kwi Map
iifoto: Moscow State Institute of Relations International ezisemthethweni kwiFacebook
Moscow State Institute of reviews Relations International
Dibanisa ukuxoxa ngayo eMoscow State Institute of Relations International.
LaseYaroslavl State University Yaroslavl
LasePetrozavodsk State University Petrozavodsk
AseVolgograd State University Medical aseVolgograd
The Russian National Research Medical University eMoscow
SaseTomsk State University of Control Systems kunye Radioelectronics saseTomsk